धनुषाको महेन्द्रनगरमा दैनिक जसो दुर्घटना ! खै ट्राफिक नियम – खोज केन्द्र
» खोज रिपोर्ट » ब्लग » समाचार » समाज अंक: 6812
धनुषाको महेन्द्रनगरमा दैनिक जसो दुर्घटना ! खै ट्राफिक नियम
सम्राट खनाल मंगलबार, फाल्गुण २५, २०७७ मा प्रकाशित
जनकपुर ढल्केबर सडक खण्डमा पर्ने महेन्द्रनगरमा दैनिक जसो दुर्घटना हुने गरेको छ । सडकको क्षेत्रफल ठूलो भएको हुदा सवारी साधन दुर्घटनामा उल्लेखनीय रुपमा बढेको हो ।
दुर्घटनाको हिसाबमा सखुवा चोक र नया बजार चोक उच्च जोखिममा रहेका छन ।बजार क्षेत्रमा नै करिब दस ओटा भन्दा बढी बिधालय रहेको यस क्षेत्र साना बालबालिकाका लागि जोखिम रहेको छ ।
पशु बजारको रुपमा चिनिने सखुवा बजार जाने मार्ग पनि यसै बाटो पर्ने हुदा यस क्षेत्र दुर्घटनाको हिसाबले निकै संबेदनसिल रहेको छ । सडक निकै चौडाइ भयपछि दैनिक जसो दुर्घटना हुने गरेको छ ।
निकै स-साना बाल बालिकाले हाइ स्पीडमा रहेको सबारी साधनको गति ठम्माउन नसक्ने भएको हुदा दुर्घटना वृद्धि भएको स्थानिय बताउछन ।